Pep Guardiola oo u sharraxan abaal-marintii saddexaad ee macallinka bishan Premier League. | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Pep Guardiola oo u sharraxan abaal-marintii saddexaad ee macallinka bishan Premier...
Pep Guardiola oo u sharraxan abaal-marintii saddexaad ee macallinka bishan Premier League.
Tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa ka mid ah musharixiinta u sharaxan abaal marinta macalinka bisha Janaayo ee horyaalka Premier League.
51-jirkan ayaa abaal-marintan ku guuleystey bilihii Nofeembar iyo Disembar ka dib markii uu hoggaamiyeyaasha horyaalka ku hogaamiyay guulo la yaab leh oo 10 ah oo xiriir ah.
Guushan isku xigta ayaa sanadka cusub laga dhigay 12 kulan ka dib markii ay garaaceen Arsenal iyo kooxda horyaalka ku xifaaltaman ee Chelsea, laakiin City ayaa ugu danbeyn soo afjartay markii ay ku qasbanaadeen inay barbaro 1-1 ah la galaan Southampton isbuucii hore.
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp , Wolverhampton Wanderers ‘ Bruno Lage iyo Norwich City ‘s Dean Smith ayaa sidoo kale loo magacaabay abaalmarinta billaha ah.
Ka dib markii uu ku bilowday sanadka cusub barbaro 2-2 ah oo xiiso leh oo ay la galeen Chelsea, Klopp’s Reds ayaa dhibcaha ugu badan ka heshay Brentford iyo Crystal Palace, iyagoo dhaliyay seddex gool labadii kulan ee ay ka maqnaayeen Mohamed Salah iyo Sadio Mane .
Dhanka Lage, Portuguese-ka ayaa Wolves ku hogaamiyay seddex guul seddex ka mid ah, iyagoo 3-1 kaga badiyay Brentford iyo Southampton oo ay kaga horeysay 1-0 ay kaga badiyeen Manchester United, guushoodii ugu horeysay ee Old Trafford muddo ka badan 40 sano.
Dhanka kale Smith ayaa Norwich u horseeday guulo xiriir ah oo ay ka gaareen Everton iyo Watford, isagoo dhaliyay shan gool mudadaas, taasoo ka caawisay Canaries inay ka soo baxaan heerka labaad markii ugu horeysay tan iyo maalintii furitaanka xilli ciyaareedka.
DEG DEG: Guddiga Xalinta khilaafaadka oo go’aan ka gaaray kursigii loo...
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa sheegay inuu soo gabagabeeyey baaritaanka dacwaddii laga gudbiyey kursiga nambarkiisu yahay HOP#067 ee doorashadiisa...
Doorashada gobollada waqooyi oo lagu soo gabagabeeyey Muqdisho + Sawirro
Chelsea iyo Arsenal oo ka mid ah kooxaha doonaya xiddiga Crystal...
Sawirro: Xamza oo caawa la kulmay Farmaajo iyo Sheekh Shariif
DEG DEG: Taliye Xijaar oo dalbaday in dib loo dhigo doorashada...
Wadahadallo u bilaawday Qoor Qoor iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Maxaa laga filaya...
Sacuudiga oo marki ugu horeeysay xusay aas-aasihi boqortooyada (Warbixin)
Doodda ka taagan Amniga ee Shirka Muqdisho iyo ‘laba arrin oo...
Mauricio Pochettino oo doonaya inuu ku soo laabto Tottenham Hotspur.